Wasiirka Ganacsiga oo si weyn loo hadal haayo in Farmaajo u magacaabi doono Ra’iisul Wasaaraha | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Ganacsiga oo si weyn loo hadal haayo in Farmaajo u magacaabi...
Wasiirka Ganacsiga oo si weyn loo hadal haayo in Farmaajo u magacaabi doono Ra’iisul Wasaaraha
Eng. Abdullahi Ali Hassan, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumaddii codka kalsoonida lagala noqday ayaa si weyn loo hadal hayaa in uu noqon doono shaqsiga madaxweyne Farmaajo u xulan doono ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Somalia.
Warar lagu kalasoon yahay ayaa xaqiijinaaya in shaqsiyaadka ugu cad cad ee la hadal haayo uu kow ka yahay Eng. Abdullahi Ali Hassan, oo mudo sanad ah hayay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha.
Mudadaasi uu wasiirka ahaa Engineerka ayaa qabtay howllo aad u fara badan oo lagu horumariyay dhinacyada shuruucda ganacsiga , siyaasadaha iyo dedaalada lagu horumarinaayo maal-gashiga iyo warshadeynta Soomaaliya. Sidoo kale, Eng. Abdullahi ayaa mudadii uu xilkaasi hayay waxay wasaaraddu ku guuleysatay inay hirgeliso hindise sharciyeedyada wasaaradda. dadaaladaasi ayay wasaaradda ganacsiga dhinac walba ka sameysay horumar dhan walba leh.
Eng Abdullahi A Hassan oo aan dalka meelna ugu bixin, ayaa wuxuu ka mid yahay aqoonyahanadii wax-galka ah ee wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomalia 1991 u istaagay dhinacyada horumarinta bulshada rayidka, u adeegida shacabka Soomaaliyeed ee ay aafeyeen dagaalada sokeeye, dowlad la’aanta, fatahaadaha, abaaraha iyo gaajada isagoo ku howlanaa gargaarka beni’aadinimada iyo samatabixinta bulshada dhibaateysan 30-kii sano ee la soo dhaafay.
Laga soo bilaabo sanadkii 1990 waxa uu ku howlanaa u gargaaridda dadka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo abaaraha saameeyeen. wuxuu soo noqday agaasimaha Hay’adda Waxbarashada iyo Hormarinta ee CED oo ah hay’ad maxalli ah oo ka shaqeeysa arimaha gargaarka bani’aadanimada, wuxuu horay u ahaa Madaxii Barnaamijyada iyo Mashaariicda isla markaana ka mid ahaa xubnihii maamulka sare ee hay’adda DBG sanadkii 1996-kii.